काठमाण्डौं । पुस १५ । अन्तराष्ट्रिय स्तरको अध्यापन गराँउदै आइरहेको काठमाण्डौंको गोंगबु बानियाटार स्थीत काठमाण्डौं युरो स्कुलद्धारा जिवित देवि कुमारीको बारेमा पाठ्यक्रममानै राखेर विद्यार्थीहरुलाई अध्यापन गराउन थालेको छ ।
धर्म, संस्कृति माथी अतिक्रमण भइरहेको अवस्थामा विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई स्थानीय धर्म, रितीरिवाज र परम्पराको अध्यन र अनुसन्धान गर्नको लागी स्थानीय पाठ्यक्रममानै जिवित देवि कुमारी राखेको विद्यालयका अध्यक्ष प्रमोद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
टोखामा रहेको हरेक सांस्कृतीक सम्पदाहरुलाई उजागर गर्न सके आगामी दिनमा स्थानीय धर्म र संस्कृतीको जगेर्ना हुने अध्यक्ष प्रमोद पाण्डेले जोड दिनुभयो ।
यसै बिच काठमाडौं युरो स्कुल गोंगबुका कक्षा ४ देखि ६ कक्षामा अध्यनरत व्रिटिस काउन्सील अन्तराष्टिय बिद्यालय पुरस्कारमा सहभागी बालबालीकाहरुलाई जिवित देवी कुमारी घर टोखामा भ्रमण गराएको छ ।
भ्रमणका क्रममा विद्यार्थीहरुले कुमारी कसरी छानीन्छ ? र कुमारीको पुजा आज कसरी गरीन्छ ? भन्ने बारेमा स्थानीय नाइके हेमराज श्रेष्ठसँग जिज्ञासा राखेका थिए । विद्यार्थीहरुको जिज्ञासाको जबाफ दिँदै श्रेष्ठले स्थानीय डंगोल समुदायको रजस्वला नभएकी कन्या कुमारीलाई रजस्वला नभए सम्मका लागी स्थानीय नाइकेले छनौट गर्ने परम्परा रहेको बताउनुभयो ।
विद्यार्थीहरुले जिवित देवी कुमारी र गणेशको पुजा विधी, लुगा गहना लगाउने प्रकियाको बारेमा जानाकारी हासिल गरेका छन् । स्थानीय संस्कृती अवलोकन पश्चात विद्याथीहरुले कुमारी र गणेशको पुजा गरी अशिर्वाद लिएका छन् । टोखामा गरीने स्थानीय गणेश र कुमारीको पुजाको बारेमा अन्तराष्टिय समुदायमा पुर्याउन काठमाडौ युरो स्कुल प्रयासरत रहेको विद्यालयका संस्थापक राजाराम पुडासैनीले बताउनुभयो ।
विद्यालयको संयोजक सुस्मा घिमीरेले आफुले स्थानीय समाजको परिचय वालबालीकाहरु माझ पुर्याउन सफल भएको बताउनुभयो । स्थानीय दशनारायण लवटको सक्रिय सहभागीले काठमाडौं युरो स्कुलका बालबालीहरुलाइ समग्र टोखाको बारेमा जानाकारी लिन सहज भएको थियो । आगामाी दिनका स्थानीय पाठ्यक्रममा स्थानीय विषयहरुको अध्यन र अनुसन्धान गरी उजागर गर्ने उदघोष गरेको छ ।